Ny lahatsoratr'i Joe Intile ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Joe Intile
Joseph Intile dia talen'ny famoronana ao amin'ny InMarket ary manana traikefa 10+ taona niasa ho mpamorona trano sy mpiasa tsy miankina, manokana amin'ny famolavolana marika, pirinty ary famolavolana finday.
Inona no fialantsasatra nampianarin'ny 2020 anay momba ny paikadim-barotra amin'ny finday amin'ny 2021
Alatsinainy Janoary 11, 2021 Alatsinainy Janoary 11, 2021 Joe Intile
Tsy lazaina intsony izany, fa ny vanim-potoana fialantsasatra tamin'ny taona 2020 dia tsy hafa amin'ny zavatra hafa niainantsika tamin'ny famoronana. Miaraka amin'ny fameperana lavitra ny fiaraha-monina manerana izao tontolo izao, ny fihetsika ataon'ny mpanjifa dia miala amin'ny fanao mahazatra. Ho an'ny mpanao dokam-barotra, io dia manaisotra antsika bebe kokoa amin'ny paikadim-pomba nentim-paharazana sy ivelan'ny trano (OOH), ary mitarika fiankinan-doha amin'ny fifandraisana amin'ny finday sy nomerika. Ho fanampin'ny fanombohana teo aloha, ny fiakarana karatra fanomezana mbola tsy nisy toy izany dia antenaina fa hanitatra ny fialantsasatra